All Ebooks :: Malagasy :: Ny Fahaiza-Mihaino (Natonta faha-2) E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyNy Fahaiza-Mihaino (Natonta faha-2) E BOOK)
Ny Fahaiza-Mihaino (Natonta faha-2) E BOOK)
Tsy misy foto-dresaka tsara mihoatra ny hoe anaty sitra-pon’ Andriamanitra marina. Ny zavatra iray tena mampiavaka ny ministeran’ ny filazantsara dia ny fahaizany mihaino ny feon’ Andriamanitra an-tsakany sy an-davany. Tena zava-dehibe tokoa ny manaraka ny Fanahy Masina ho ao amin’ ny sitrapon’...
Tsy misy foto-dresaka tsara mihoatra ny hoe anaty sitra-pon’ Andriamanitra marina. Ny zavatra iray tena mampiavaka ny ministeran’ ny filazantsara dia ny fahaizany mihaino ny feon’ Andriamanitra an-tsakany sy an-davany. Tena zava-dehibe tokoa ny manaraka ny Fanahy Masina ho ao amin’ ny sitrapon’ Andriamanitra marina. Rehefa ao anatin’ ny sitrapon’ Andriamanitra marina ianao dia hamelana sy hahavita izay irinao rehetra ho an’ Andriamanitra. Ity asa mahatalanjona nataon’i Dag Hewrd-Mills ity dia hisy fiatraikany lehibe eo amin’ ny fiainanao sy ny asa fanompoana